Azikaphumi iingxelo zonyulo lwe-SRC e-CPUT - Vernac News
October 8, 2018 May 2, 2020 Vernac News
EKapa – Kuyaqhubeka ukubalwa kwevoti e-CPUT kwikhampasi iDistrict 6 emva kokuphazamiseka kokubalwa ngoLwesihlanu.
Unyulo lweBhunga lonyaka ozayo luqale kwiveki ephelileyo kodwa kunanamhlanje azikaphumi iingxelo.
NgoLwesihlanu isithethi saledyunivesithi uLauren Kansley saxela ukuba ubalo lwamaphepha okuvota lwaphazamiseka emva kwezikhalazo ezaphakanyiswa ngamaqela ezopilitiko kuledyunivesithi malunga nemiba engqamene nokubalwa.
Ledyunivesithi ayikakhuphi ngokusesikweni iingxelo zonyulo lweekhamapasi zaledyunivesithi. Iingxelo kumakhasi onxibelelwano zibonakalisa ukuba i-Economic Freedom Fighters yiyo ephumeleleyo eBellville kunye naseMowbray, eliziko alikakungqini okanye likuchase oku.
Iinkokheki zabafundi eDistrict 6 zithe kulindeleke ukuba ukubalwa kuqosheliswe namhlanje.
Idyubivesithi ibingekaphenduli ngexesha sipapasha elinqaku.
Tagged CPUT SRC elections